ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ထောက်ခံကြိုဆိုပွဲ မြင်းခြံတွင် ပြုလုပ် - Latest News
ဆုငွေမထုတ်သည့် ကျပ် ၅၀၀ တန် ထီဆုမဲ ၁ သောင်းကျော်ကို နိုင်ငံဘဏ္ဍာ သိမ်းမည်
အီတလီမြေကို ပြန်သွားပြီး နည်းပြလုပ်ချင်ဟု ဖေဘီယိုကနာဗားရိုး ပြောကြား
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ထောက်ခံကြိုဆိုပွဲ မြင်းခြံတွင် ပြုလုပ်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ၄၅. ဦးကော်မတီက တင်သွင်းလာတဲ့ အစီရင်ခံစာ ထောက်ခံကြိုဆိုပွဲကို ဒီကနေ့ သြဂုတ် ၈ ရက် မနက်ပိုင်းက မြင်းခြံမြို့ မဏိကဉ္စာနာခန်းမရှေ့ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ကြိုဆိုပွဲမှာ စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦး နှင့် ဆရာညီမင်းညိုတို့က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါရှိတဲ့ ပုဒ်မတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ဘာကြောင့် လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီထောက်ခံပွဲမှာ လူအင်အား ၃၀၀၀ လောက် တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခြေ/ဥ ပြင်ဆင်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံကြစို့ စတဲ့ ဗီနိုင်းတွေကိုကိုင်ဆောင်ကာ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ေ ခုလို ထောက်ခံပွဲတွေကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ မုံရွာ အပါအဝင် အခြားမြို့တွေမှာလည်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သတင်း-ရီရီထွန်း (မြင်းခြံ)၊ ဓာတ်ပုံ အေးချမ်းနိုင်
ဖြဲ့စည်းပျုံပင်ဆင်ရေး ထောက္ခံကြိုဆိုပျြဲမင်းခြံတြင်ျပုလုပ်
၂၀၀၈ ဖြဲ့စည်းပုံအျေခခံဥပေဒျပင်ဆင်ရေးအတြက် ၄၅. ဦးက္မောတီက တင်သြင်းလာတဲ့ အစီရင္ခံစာ ထောက္ခံကြိုဆိုပြဲကို ဒီကေန့ သြဂုတ် ၈ ရက် မနက္ပိုင်းကျမင်းခြံမြို့ မဏိကဉ္စာနာခန်းမေရွ့ရွိ ဗိုလ္ခ်ုပ်ကြေးရုပ်ရင်ျပင္မွာ က်င်းပျပုလုပ္ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကေန့ကြိုဆိုပြဲမွာ စာရေးဆရာ ထင္လင်းဦး နွင့် ဆရာညီမင်းညိုတို့က ဖြဲ့စည်းပုံအျေခခံဥပေဒမွာပါရွိတဲ့ ပုဒ္မေတြကျိုပင်ဆင္ဖို့ ဘာကြောင့် လိုအပ္တယ်ဆိုတာ ဟေျာေပာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီထောက္ခံပြဲမွာ လူအင်အား ၃၀၀၀ လောက် တက်ရောက္ခဲ့ကြတျာဖစ်ပြီး ၂၀၀၈ျေခ/ဥျပင်ဆင္ဖို့ ဝိုင်းဝန်းထောက္ခံကြစို့ စတဲ့ ဗီနိုင်းတြေကိုကိုင်ဆောင္ကာ ကြေးကြေ္ခာဲ့ကြပါတယ်။ေ ခုလို ထောက္ခံပြဲတြေကို ရန္ကုန်၊ မန္တေလး၊ စစ္ကိုင်း၊ မုံရြာ အပါအဝင် အျခားမြို့တြေမွာလည်း က်င်းပျပုလုပ္ခဲ့ကြပါတယ်။
သတင်း-ရီရီထြန်း (ျမင်းခြံ)၊ ဓာတ္ပုံ အေးခ်မ်းနိုင်
ပင်လယ်ကျားဖောင်လုပ်ငန်းတွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုရှိမရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး
ရက်ပိုင်းအတွင်း ကြည့်ရှုသူ ၂၄ သန်းကျော်ရှိနေသည့် Black Widow စူပါ ဟီးရိုးရုပ်ရှင်(နမူနာ)
ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ ငွေလဲနှုန်းနှင့် ရွှေဈေး
ပုသိမ်မြို့တွင် ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ် ရင်ပြင်နှင့်ကျောက်တိုင် တည်ဆောက်မည်